HIM | Health in Myanmar » 2010 » March
New report on realities and possibilities
There isanew report released today entitled: “Current Realities and Future Possibilities in Burma/Myanmar: Options For U.S. Policy – Asia Society Task Force Report”. The report is full of advice for the American government. It is written byastellar coalition. But the editing could have usedabit more work. …
HIV နှင့် ပတ်သက်သည့် သိသင့်သည့် အချက်များ (၃)
HIV ကူးစက်ချင်းမှတော့ HIV ပိုးများလူ့ခန္ဓာထဲသို့ဝင်လာရင် ကိုယ်ခံအားစနစ်ထဲက ဆဲလ်တွေကို ဖျက်ဆီးပြီး HIV ပိုးထုပ်လုပ်ပေးတဲ့ စနစ်တစ်ခုကို သူတို့ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ကိုယ်ခံအာစနစ်ထဲက ဆဲလ်တွေတဖြည်းဖြည်း လျော့နည်းလာပြီး AIDS စတင်ဖွံဖြိုးလာပါတယ်။
French companies and your liberty
The junta is going to learn how to block the three words “liberty, equality, and fraternity”.
Opportunity foracivsoc speaker to be heard
A civil society speaker from inside Burma would makeasplash.
HIV နှင့် ပတ်သက်သည့် သိသင့်သည့်အချက်များ (၂)
၇နှစ် အတွင်းမှာ လက္ခဏာ မပေါ်ပေမယ့်၊ ပုံမှာ သတိထားမိလား။ CD4+ cell ရေအတွက်တွေ တစ်ဖြည်းဖြည်း ထိုးဆင်းသွားတာကို။ ၇နှစ် နဲ့ ၈ နှစ်ကြားမှာ Viral Load ပြန်တက်လာပြီး CD4+ ကတော့ ကျမြဲ ကျနေတဲ့အတွက် အခြေအနေ သိပ်မကောင်းတော့ဘူး။ အဲဒီမှာ ရောဂါ လက္ခဏာတွေ စပြလာပြီ။ နောက်ပိုင်းမှာ Viral Load က ပုံမှာ မြင်တဲ့အတိုင်း သိန်းနဲ့ သန်းနဲ့ ချီပြီး များလာပါတော့တယ်။
HIV နှင့် ပတ်သက်သည့် သိသင့်သည့်အချက်များ (၁)
HIV/AIDS နှင့် ပတ်သက်၍ သိသင့်သည့်အချက်များကို ရောဂါဖြစ်ပေါ်လာပုံနှင့် ရောဂါ လက္ခဏာများကို တစ်ဆင့်ချင်း အသေးစိတ် ဓါတ်ပုံများနှင့်တကွ တင်ပြထားပေးပါသည်။
မှားယွင်းမှု တစ်ခု၏ အလျားနှင့် အနံ
“ဒါနဲ့နေပါဦး။ မင်း သီရိနဲ့နေတဲ့ ကာလတစ်လျှောက် ကွန်ဒုံး သုံးရဲ့လား” ဆိုသည့် ဦးမောင်မောင်ကျော်၏ စကားတစ်ခွန်းကတော့ ဦးဘကောင်း၏ နားထဲတွင် ဗုံးတစ်လုံး ကျကွဲသလို တုန်ခါ မြည်ဟည်းသွားသည်။ ကွန်ဒုံး။ ကွန်ဒုံး။ သီရိက သူ့ကို သုံးဖို့ ပြောပေမယ့် တွေ့ခါစ တစ်ခါ၊ နှစ်ခါပဲ သုံးဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်း လုံးဝမသုံးဖြစ်တော့။
Regional report on one of the most important coinfections - TB
Tuberculosis and hepatitis C are the two most important coinfections in people living with HIV in Myanmar and it is probably the most important opportunistic infection. All people working in HIV need to know about it.
အာဖရိက အေအိုင်ဒီအက်စ် တိုက်ဖျက်ရေးတွင် မိုဘိုင်းဖုန်းများ အရေးပါလာ
ကျန်းမာရေး အခြေခံအဆောက်အအုံများ မလုံလောက်သော အာဖရိကတွင် မိုဘိုင်းဖုန်း နည်းပညာ သစ်များက အေအိုင်ဒီအက်စ် တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လာနေကြောင်း UNAIDS အမှုဆောင်ညွှန်ကြား ရေးမှူးမစ်ရှယ်စီဒီဘီက ပြောကြားခဲ့သည်။
မှတ်ပုံတင်မဲ့ဆေးဝါးများအတွက် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ညှိနှိုင်းရန် ထိုင်းကြိုးပမ်း
အေအိုင်ဒီအက်စ်၊ ကင်ဆာနှင့် နှလုံးရောဂါတို့အတွက် နောက်ဆုံးပေါ် ဈေးကြီးသည့်ကုသမှုဆေးဝါး များ မှတ်ပုံတင်မူပိုင်ခွင့် ကာကွယ်ထားမှုကို စစ်ဘက်ကျောထောက်နောက်ခံရှိ ထိုင်းအစိုးရက ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရာ ထိုင်းတို့အတွက် ဈေးသက်သာသော ပုံစံတူမှတ် ပုံတင်မဲ့ ဆေးဝါးများကို ထုတ်လုပ်သုံး စွဲနိုင်စေခဲ့သည်။
ငှက်ပျောသီးတွင်ပါဝင်သော ဒြပ်ပေါင်းက HIVကို ဟန့်တားနိုင်စွမ်းရှိကြောင်း သုတေသနတစ်ခုကဖော်ပြ
မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့ထုတ် Biological Chemistry ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားချက်အရ ငှက်ပျောသီး၌ ပါဝင်သော Ban Lec ဟုခေါ်ဆိုသည့် ဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုးသည် အိတ်ခ်ျ အိုင်ဗီကူးစက်မှုကို ဟန့်တားနိုင်ပြီး ကြိုတင်ကာကွယ်မှုကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ဓာတ်ခွဲခန်း စမ်းသပ်မှုများအရ အမျိုးသမီးများ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုး ကူးစက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရာတွင်လည်း ယင်းဒြပ်ပေါင်းမှာ အထောက်အကူပြုနိုင်ကြောင်း သိရသည်။